FIFA: Koobka Adduunka Labadii Sannaba Mar Ayaa La Cayaarayaa – Garsoore Sports
FIFA: Koobka Adduunka…
Xiriirka Kubadda-Cagta adduunka ee FIFA ayaa Jimcihii maanta ahaa dib u habeyn ku sameeyay jadwalka taariikhda kubbada-cagta ee caalamiga ah wixii ka dambeeya 2024.
FIFA ayaa sheegtay inay u furan tahay “wax walba” oo ay ku jiraan abaabulka Koobka Adduunka labadii sannaba mar, taasoo dhibaato ku noqon karta cayaaryahannada kubbada-cagta.
Shirweynihii 71-aad ee FIFA ayaa cod aqlabiyad leh logu codeeyay in la qaado “daraasad ku saabsan suurtagalnimada in la sameeyo” Koobabka Adduunka ee ragga iyo dumarka “labadii sannaba mar”.
Waqti kama dambays ah looma qabanin dib-u-habeynta tartankan ku xardhan taajka isboortiga, oo ah isha ugu weyn ee wax soo saarka FIFA tan iyo markii la aasaasay 1928-kii, waxaana lagu tartamayay afartii sannaba mar tan iyo 1930-kii ragga iyo 1991-kii dumarka.
Madaxa horumarinta kubbada-cagta FIFA Arsene Wenger ayaa soo jeediyay bishii Maarso in Koobka Adduunka, Koobka Qaramada Yurub iyo tartamada kale ee caalamiga ah la qabto labadii sannaba mar.
Waxay ahayd fikrad ay ku tilmaameen “mid aan macquul ahayn” xiriirka Horyaaladda Yurub ee UEFA oo ah hay’ad ay ku mideysan yihiin 37 horyaal iyo ururada naadiyada Yurub, laakiin wali waxay ku jirtaa warbixin uu fuliyay Wenger oo la sii daayay isbuucii hore.
Madaxweynaha FIFA Gianni Infantino ayaa sheegay dhammaadkii bishii Maarso inuu u furan yahay wixii fikrad ah ee ku saabsan kaalandarka kubbada-cagta wixii ka dambeeya 2024 wuxuuna horraantii bishaan balanqaaday “wadahadalo xiiso leh” oo ku saabsan soo jeedinta Wenger.
Koobka Adduunka ee labadii sannaba mar la qabto ayaa ah mid soo jiidanaya warbaahinadda tabinta laakiin waxaa la filayaa inay si weyn uga hor imaan doonaan xiriirada, horyaaladda iyo kooxaha ka baqaya inay cayaaraan cayaartoydooda daali kara jir ahaan.
“Laga yaabee inaan weydiisanno UEFA iyo FIFA inay kordhiyaan sannadka, waxaa laga yaabaa inaan heysano 400 maalmood sannadkii,” ayuu yiri tababaraha Manchester City Pep Guardiola bishii hore.
Koob Adduunka labadii sannaba mar ayaa sidoo kale qeexaya dhammaadka kulamada saaxiibtinimo, taasoo horseedi doonta in dib loo habeeyo qaab dhismeedyada isreebreebka isla markaana looga baahan yahay kooxaha inay fasaxaan ciyaartoydooda caalamiga ah xagaa kasta.
Sannadka 2024 oo is beddeladan la qorsheeynayo ayaa sidoo kale wuxuu kusoo beegmayaa xilli lasoo saaray hab cusub oo tartanka UEFA Champions League-ga loogu tartami doono, taasoo lagu kordhin doono 100 kulan oo dheeri ah.
“Naadiyadu waxay halis ugu jiraan ciyaartoydooda inay dhaawacyo badan kusoo qaataan jadwalka cufan, halka faa’iidooyinka dhaqaale ay sidoo kale yihiin kuwo aan la hubin, sida uu sheehay Raffaele Poli, oo ah madaxa CIES Football Observatory.